ဘယ်အရွယ်မှာ လက်ထပ်တာက အကောင်းဆုံးလဲ? – Trend.com.mm
အသက် တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ကွာသွားရင်တောင် ၂၀တုန်းကကိုယ်နဲ့ ၂၁က ကုိုယ်ဟာ အတော်လေးကွာခြားသွားတတ်ပါတယ်။အမြင်တွေလည်းမတူသလိုခံစားချက်အယူအဆတွေကလည်း မတူတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့် အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ်မှာလက်ထပ်တာနဲ့ အသက် ၃၀ မှာလက်ထပ်တာဟာလည်းအထိုက်အလျောက်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။လေ့လာသူပညာရှင်တစ်ချို့ကတော့ အသက် ၃၀အရွယ်မှာလက်ထပ်တာက အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတာ အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်
အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနေဆဲအချိန်
အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်သူလဲ၊ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲရှာဖွေနေဆဲအချိန်ပါ။နှစ်ဖက်အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်းအဆင်ပြေ၊ဘာကိုမှလည်းစိတ်ပူစရာမလို၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကလည်းချစ်မြတ်နိုးကြလို့အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့စုံတွဲတွေရှိပေမဲ့ အများစုက အချစ်ကို မျက်စိစုံမှိတ်လို့ ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့စုံတွဲတွေပါ။ဒီအရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုတာကို မှားယွင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီအရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ပြုတာဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ပြုတာထက် ပိုပြီးအခက်အခဲတွေများများကြုံတွေ့ရမှာအမှန်ပါပဲ။
*အသက် ၂၀တုန်းက ကိုယ်နဲ့ အသက် ၃၀က ကိုယ့်ရဲ့  လူမှုဆက်ဆံရေးက ကွာခြားသွားတယ်
အရင်တုန်းကလေးစိတ်နဲ့တွေးခဲ့ပြောခဲ့သမျှတွေဟာအသက် ၃၀ အရွယ်ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာတော့ အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ ကိုယ်ပြောသမျှစကားတွေက အလေးအနက်ဖြစ်လာပြီး တစ်ခြားသူတွေရဲ့ စကားတွေကိုလည်း အလေးအနက်ထားတတ်လာ၊နားလည်ပေးတတ်တာ၊ဖြည့်တွေးပေးတတ်လာပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် ၂၀ကျော်လူငယ်တွေဟာလည်းအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးမညံ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း အသက် ၃၀ အရွယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးအမြင်၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တော့ ကွာခြားနေဆဲပါ။
*အသက် ၃၀ အရွယ်မှာကိုယ်လိုချင်တာဘာလဲတိတိကျကျသိလာတယ်
တစ်ချို့အသက် ၃၀ အရွယ်ထိ မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အသက် ၃၀အရွယ်လူလတ်ပိုင်းအများစုကတော့ ဒီအရွယ်မှာ ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ တိတိကျကျသိကြပါတယ်။အသက် ၂၀၊အသက် ၂၀ကျော်အရွယ်မှာ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေပေမဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ပိုပြီးတိကျလာပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
အသက် ၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလည်း အပြည့်အ၀တည်ဆောက်တတ်လာပြီး ဘယ်အရာက ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတွေးတောတတ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအတွေးအမြင်ဟာ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း အထောက်အကူပြုနေပါတယ်။လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အသက် ၃၀ အရွယ်ဆိုတာ အချစ်ကိုဦးစားမပေးတော့ပဲ လိုက်ဖက်မျှတစွာရွေးချယ်တတ်လာတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။
အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်ရှာရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကို ကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ရတာပိုများလာပါတယ်။ငယ်တုန်းကတော့ကြိုတင်စဉ်းစားထားတာမရှိပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာလေ ကိုယ့်ငွေကို ကိုယ်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်လာလေ၊စီမံခန့်ခွဲမှုပိုကောင်းလာလေပါပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ငွေကြေးယိုဖိတ်မှုကင်းစင်နေမှာပါ။အိမ်ထောင်ဖက်ကလည်း စည်းစနစ်တကျငွေကြေးခန့်ခွဲရှာဖွေတတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
ငယ်တုန်းမှာတော့ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျမရှိတတ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အသက် ၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်မှာတော့ အလုပ်အကိုင်အတည်တကျဖြစ်နေပြီး ၀င်ငွေကလည်း အသက် ၂၀အရွယ်ကထက် ပိုများနေပါပြီ။ဒါကြောင့် မိဘတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းထောက်ပံ့နိုင်သလို အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှနောက်ဆံတင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာအိမ်ထောင်ပြုတာက ပိုပြီးကောင်းမွန်ကြောင်း၊အိမ်ထောင်ရေးပိုပြီးအဆင်ပြေသာယာနိုင်ကြောင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသကျ တဈနှဈနဲ့တဈနှဈကှာသှားရငျတောငျ ၂ဝတုနျးကကိုယျနဲ့ ၂၁က ကုိုယျဟာ အတျောလေးကှာခွားသှားတတျပါတယျ။အမွငျတှလေညျးမတူသလိုခံစားခကျြအယူအဆတှကေလညျး မတူတော့ပါဘူး။ဒါကွောငျ့ အသကျ ၂၀ ကြျောအရှယျမှာလကျထပျတာနဲ့ အသကျ ၃၀ မှာလကျထပျတာဟာလညျးအထိုကျအလြောကျကှာခွားမှုရှိပါတယျ။ကြှမျးကငျြသူပညာရှငျတှကေတော့ အသကျ ၃ဝအရှယျမှာလကျထပျတာက အကောငျးဆုံးပဲလို့ပွောထားပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတာ အတူတူ ကွညျ့လိုကျရအောငျ
အသကျ ၂ဝကြျောအရှယျဟာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျအဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုနဆေဲအခြိနျ
အသကျ ၂ဝကြျောအရှယျဆိုတာ ကိုယျဘယျသူလဲ၊ကိုယျဘာတှလေုပျနိုငျလဲရှာဖှနေဆေဲအခြိနျပါ။နှဈဖကျအသိုငျးအဝိုငျးကလညျးအဆငျပွေ၊ဘာကိုမှလညျးစိတျပူစရာမလို၊နှဈဦးနှဈဖကျလုံးကလညျးခဈြမွတျနိုးကွလို့ပွုကွတဲ့စုံတှဲတှရှေိပမေဲ့ အမြားစုက အခဈြကို မကျြစိစုံမှိတျလို့ ခကျခကျခဲခဲရှငျသနျဖို့ကွိုးစားကွတဲ့စုံတှဲတှပေါ။ဒီအရှယျမှာ အိမျထောငျပွုတာကို မှားယှငျးတယျလို့ဆိုလိုတာမဟုတျပမေဲ့ ဒီအရှယျမှာ အိမျထောငျပွုတာဟာ အသကျ ၃၀ အရှယျမှာအိမျထောငျပွုတာထကျ ပိုပွီးအခကျအခဲတှမြေားမြားကွုံတှရေ့မှာအမှနျပါပဲ။
*အသကျ ၂ဝတုနျးက ကိုယျနဲ့ အသကျ ၃ဝက ကိုယျ့ရဲ့လူမှုဆကျဆံရေးက ကှာခွားသှားတယျ
အရငျတုနျးကလေးစိတျနဲ့တှေးခဲ့ပွောခဲ့သမြှတှဟောအသကျ ၃၀ အရှယျပွနျတှေးတဲ့အခါမှာတော့ အဓိပ်ပာယျမရှိတာတှဖွေဈလာပါတယျ။အသကျ ၃၀ အရှယျမှာ ကိုယျပွောသမြှစကားတှကေ အလေးအနကျဖွဈလာပွီး တဈခွားသူတှရေဲ့ စကားတှကေိုလညျး အလေးအနကျထားတတျလာ၊နားလညျပေးတတျတာ၊ဖွညျ့တှေးပေးတတျလာပါတယျ။ဒီနခေ့တျေ ၂ဝကြျောလူငယျတှဟောလညျးအပေါငျးအသငျးဆကျဆံရေးမညံ့ဘူးဆိုပမေဲ့လညျး အသကျ ၃၀ အရှယျလူတဈယောကျရဲ့အတှေးအမွငျ၊ဆုံးဖွတျခကျြတှနေဲ့တော့ ကှာခွားနဆေဲပါ။
*အသကျ ၃၀ အရှယျမှာကိုယျလိုခငျြတာဘာလဲတိတိကကြသြိလာတယျ
တဈခြို့အသကျ ၃၀ အရှယျထိ မရငျ့ကကျြသေးဘူးဆိုတာတှရှေိပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အသကျ ၃ဝအရှယျလူလတျပိုငျးအမြားစုကတော့ ဒီအရှယျမှာ ကိုယျဘာကိုလိုခငျြတယျဆိုတာ တိတိကကြသြိကွပါတယျ။အသကျ ၂၀၊အသကျ ၂ဝကြျောအရှယျမှာ ယောငျဝါးဝါးဖွဈနပေမေဲ့ အသကျ ၃၀ အရှယျမှာတော့ ကိုယျ့ရဲ့ရညျရှယျခကျြက ပိုပွီးတိကလြာပါတယျ။ဟုတျတယျဟုတျ!
အသကျ ၃ဝဆိုတဲ့အရှယျမှာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျမှုလညျး အပွညျ့အဝတညျဆောကျတတျလာပွီး ဘယျအရာက ကိုယျ့အတှကျအကောငျးဆုံးဖွဈမလဲဆိုတာ စဉျးစားတှေးတောတတျလာပါတယျ။အဲ့ဒီလိုအတှေးအမွငျဟာ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြတဲ့အခါမှာလညျး အထောကျအကူပွုနပေါတယျ။လှယျလှယျပွောရမယျဆိုရငျတော့ အသကျ ၃၀ အရှယျဆိုတာ အခဈြကိုဦးစားမပေးတော့ပဲ လိုကျဖကျမြှတစှာရှေးခယျြတတျလာတယျလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
အသကျတဈနှဈကွီးလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျရှာရတဲ့ဝငျငှနေဲ့ထှကျငှကေို ကိုယျတိုငျတှကျခကျြရတာပိုမြားလာပါတယျ။ငယျတုနျးကတော့ကွိုတငျစဉျးစားထားတာမရှိပမေဲ့ တဖွညျးဖွညျးအရှယျရောကျလာလေ ကိုယျ့ငှကေို ကိုယျပိုပွီးတနျဖိုးထားတတျလာလေ၊စီမံခနျ့ခှဲမှုပိုကောငျးလာလပေါပဲ။အဲ့ဒီအခြိနျမှာအိမျထောငျပွုမယျဆိုရငျလညျး သငျ့ရဲ့ အိမျထောငျရေးက ငှကွေေးယိုဖိတျမှုကငျးစငျနမှောပါ။အိမျထောငျဖကျကလညျး စညျးစနဈတကငြှကွေေးခနျ့ခှဲရှာဖှတေတျမယျဆိုရငျပေါ့။
ငယျတုနျးမှာတော့ ဟိုပွောငျးဒီပွောငျးနဲ့ အလုပျအကိုငျအတညျတကမြရှိတတျသေးပါဘူး။ဒါပမေဲ့ အသကျ ၃ဝအရှယျဆိုတဲ့အရှယျမှာတော့ အလုပျအကိုငျအတညျတကဖြွဈနပွေီး ဝငျငှကေလညျး အသကျ ၂ဝအရှယျကထကျ ပိုမြားနပေါပွီ။ဒါကွောငျ့ မိဘတှကေိုလညျးကောငျးကောငျးထောကျပံ့နိုငျသလို အိမျထောငျပွုမယျဆိုရငျလညျးဘာမှနောကျဆံတငျးစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒီလိုအခကျြတှကွေောငျ့ တဈခြို့အမြိုးသမီးတှဟော အသကျ ၃၀ အရှယျမှာအိမျထောငျပွုတာက ပိုပွီးကောငျးမှနျကွောငျး၊အိမျထောငျရေးပိုပွီးအဆငျပွသောယာနိုငျကွောငျးအတှအေ့ကွုံတှကေိုပွနျပွီးမြှဝခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Ariana အတွက် Miley Cyrus ရဲ့ ချစ်စဖွယ်အားပေးနှစ်သိမ့်မှု